သက်တန့်ချို: ရာသီတွေ ဘယ်လိုပဲပြောင်းပြောင်း . . . .(Menstruation)
ဒီတစ်ပတ်ဖော်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ အမျိုးသမီးရယ်လို့ဖြစ်လာရင် မဖြစ်မနေ ကြုံတွေ့လာရမယ့် ရာသီသွေးပေါ်ခြင်း အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ကျန်းမာရေးစာပေတွေ ဖတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေ ကတော့ ရာသီလာ ခြင်းအကြောင်းကို သိနိုင်ပေမယ့် စာဖတ်အားနည်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက် မိမိ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေဖြစ် ပျက်နေသလဲ ဆိုတာနဲ့ ဘယ်လို ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်နေသလဲဆိုတာ သိရှိနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပါတယ် ။ တ ကယ်တော့ ရာသီလာခြင်း ဆိုတာကို အင်္ဂလိပ်လို အရတော့ Menstruation (မန်စရေးရှင်း) လို့ခေါ်ပါတယ် ။ ရာသီသွေး ဆင်းတယ်ဆိုတာဟာ သားအိမ်ရဲ့ Lining အတွင်းပိုင်းနံရံကနေ သွေးတွေ ယိုစီးကျ လာခြင်း ( shedding ) ကို ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ မျိုးပွားနိုင်တဲ့အသက်အရွယ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းမှာ ပုံမှန်ကြုံတွေ့ ရမယ့် အခြေ အနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ ပုံမှန်ရာသီသွေးဆင်းခြင်းကို နောက်တစ်မျိုး Eumenorrhea လို့ လည်းခေါ် ပါတယ် ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ချုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ၃ ရက်နေ ၅ ရက်လောက်အထိကြာလေ့ရှိပြီး တချို့ဆိုရင်တော့ ၂ ရက်ကနေ ၈ ရက်အတွင်းကိုလည်း ပုံမှန် ရာသီပေါ်တယ်လို့ စဉ်းစားကြပါတယ် ။ ပုံမှန်အား ဖြင့် ပထမဆုံးရာသီသွေးစဆင်းတဲ့အချိန်ကနေစပြီး နောက်ထပ် ရာသီသွေးဆင်းတဲ့ ပထမရက် အထိ cycle တစ်ခု ကို ၂၈ ရက်ကြာမြင့်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း ယေဘူယျအားဖြင့်တော့ Menstrual periods ကို ၂၁ ရက်မှ ၃၅ ရက်အတွင်းကြုံရလေ့ရှိပါတယ် ။
လစဉ်ရာသီသွေးဆင်းနေစဉ်အချိန်မှာ ကြုံရတဲ့ သွေးဆုံးရှုံးခြင်းဟာ ယေဘူယျအားဖြင့် 35 mililiters ( လက်ဖက် ရည်ဇွန်း လေးဇွန်းမှ ခြောက်ဇွန်းအထိ) ရှိပြီး ၁၀ မီလီလီတာမှ ၈၀ မီလီလီတာ အတွင်းကိုတော့ ပုံမှန်အ ဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါတယ် ။ လူအများစုဟာ ရာသီသွေးအဖြစ် ခေါ်ဆိုကြတဲ့အတွက် Menstrual fluid ဆိုတာဟာ Menstrual flow ကို ခေါ်ဆိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ရာသီသွေးဆင်းတဲ့အခါမှာ တကယ်တော့ ပါဝင်တာတွေကတော့ သားအိမ်ခေါင်းမှ အချွဲရည်များ ၊ သွေးအချို့ ၊ မိန်းမကိုယ်မှ ထွက်သောအရည်များ နဲ့သား အိမ် တစ်ရှူးစလေတွေးပါဝင်ပါတယ် ။ ရာသီသွေးဟာ နီညိုရောင် အဆင်း ရှိပြီး သွေး ထက်စာရင် ပိုပြီးနက်မှောင်ပါတယ် ။ အမျိုးသမီးအတော်များများဟာ သွေးပေါ်နေစဉ်အတွင်းမှာ သားအိမ်ရဲ့အ တွင်းနံရံ ကနေ သွေးတွေကွာကျစီးဆင်းနေတာကို သတိထားမိတတ်ကြပါတယ် ။ သားအိမ်အတွင်း နံရံကနေ ကွာကြ တဲ့အ ရည်တွေမှာ တကယ်တော့ သွေးတွေနဲ့ ရောနှောနေတဲ့ တစ်ရှူးစလေးတွေပါဝင်ပါတယ် ။ ဒီလို တစ်ရှူး စလေးတွေကို သွေးခဲများ ( Menstrual clots) လို့ခေါ်ကြပါတယ် ။ ဆိုလိုတာ က သွေးခဲ ချည်းပဲသီးသန့်မဟုတ်ပဲ သားအိမ်အတွင်း နံရံ ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းများပါ ပါဝင်တယ် လို့ ပြောလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် ဒီလို သွေးခဲတွေ ဆင်းတတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးဟာ သာမန် သွေးဆင်း တဲ့အမျိုးသ မီးတွေထက် သွေးအများကြီးဆင်းတတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာ ကြုံရလေ့ရှိပါတယ် ။
တခါတရံမှာ ဒါကို ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတာနဲ့မှားယွင်းပြီးတွေးတတ်ကြပါသေးတယ် ။ သားအိမ်အတွင်းနံရံထဲမှာ Plasmin လို့ခေါ်တဲ့အင်ဇိုင်းတစ်မျိုးရှိပါတယ် ။ အဲဒီအင်ဇိုင်းဟာ သွေးကို မခဲ အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ် ။ ဒီလိုသွေးဆုံးရှုံးမှုတွေကြောင့် သွေးမဆုံးခင်အမျိုးသမီးများ Premenopausal မှာ သံဓါတ်ချို့ တဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ သွေးအားနည်းခြင်းကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် သံဓါတ်များများ ပါတဲ့အစားအသောက် များစားဖို့ လိုအပ်ပါ တယ် ။ ရာသီပျိုဖော်ဝင်ကာစ ပထမဆုံးရာသီသွေးစဆင်းတဲ့အချိန်ကာလကိုတော့ မန်နာခီ ( Menarche) လို့ခေါ် ပါတယ် ။ မန်နာခီ လို့ခေါ်တဲ့ပျိုဖော်ဝင်စအချိန် ရာသီသွေးစဆင်းတဲ့အချိန်ဟာ အသက် ၁၀ နှစ် မှ ၁၇ နှစ်အတွင်းမှာ ကြုံရလေ့ရှိပါတယ် ။ အချိန်မတိုင်ခင် သွေးဆုံးခြင်းကတော့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ မျိုးပွားနိုင် မှု Fertility စွမ်းရည် ကျဆင်းနေမယ် နောက်ပြီး သွေးပေါ်တာကလည်း မမှန်ဘူးဆို ရင်တော့ သွေး တဲ့အချိန်အထိကို Perimenopause ကို ကြုံရနိုင်ပါတယ် ။ မန်နိုပေါ့စ် ( Menopause) ဆို ကတော့ သွေး ဆင်းခြင်းဟာ လုံးဝ ရပ်သွားခြင်းကို ဆိုလိုပြီး အဲဒီသွေးဆုံးချိန်မှာတော့အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ မျိုးပွားခြင်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး ။ သွေးဆုံးခြင်းကိုတော့ အသက် ၄၀ နဲ့ ၅၀ အတွင်းမှာ ယေဘူယျ ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ် ။
အမျိုးသမီးအများစုဟာ သွေးဆင်းနေစဉ်ကာလအတွင်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုအမျိုးမျိုးအပြင် ဟော်မုန်း level အတက်အ ကျကို ဖြစ်ပေါ်စေတာတွေ့ရပါတယ် ။ ကြွက်သားများ ကျုံ့ခြင်း ( Menstrual cramping ) မှာ ရာသီသွေးရှေ့စောေ ပ်ါခြင်းသို့မဟုတ် ရာသီသွေးပေါ်လာခြင်း စတဲ့အခြေအနေတွေ ပါဝင်ပတ် သတ်လေ့ရှိပါတယ် ။ ဒါကြောင့်သွေးဆင်းနေချိန်မှာ သားအိမ်ကိုက်ခဲခြင်းတွေ ကြုံတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလိုအချိန်မှာ အမျိုးသမီးတွေဟာ ဆီးအိမ်တင်းလာမယ် လိင်အာရုံခံစား မှုပြောင်းလဲလာ မယ် မောပန်းနွမ်း နယ်ခြင်း ၊ ရင်သားများတင်း၍ နာကျင်လာခြင်း နဲ့ ပျို့ခြင်း တို့ကို ခံစားရပါတယ် ။ ရင်သား တင်းလာခြင်းနဲ့ မသက်မသာ ဖြစ်ရခြင်းဟာ တကယ်တော့ Premenstrual water retention ကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ သတိထား ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ သွေးဆင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးအနည်းစုဟာ အစားအသောက်ကို ပြည့် တင်းအောင်သောက်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် ။ အချို့သော အမျိုးသမီးတွေ မှာတော့ သွေးဆင်းနေ ချိန်မှာ ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှု အနည်းငယ်ကိုသာ ကြုံရလေ့ရှိပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း အဟာရပြည့် ၀သော အစားအသောက်များ စားသုံးခြင်း ၊ အငံဓါတ်ကိုေ လျာ့ခြင်း ၊ ကော်ဖီနဲ့အရက်ကို လျော့ခြင်း နဲ့ လေ့ ကျင့်ခန်းမှန် မှန်ပြုလုပ်ခြင်းတို့ဟာ ဒီလို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေကို ကောင်းကောင်းပြီး ထိမ်းချုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးကတော့ cycle တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူတာနဲ့အမျှ အထက်ပါ လက္ခာတွေကြုံရတဲ့ အခြေအနေဟာလည်း ကွဲပြားခြားနားလေ့ရှိပါတယ် ။
သွေးဆင်းချိန်သားအိမ်နာကျင်ခြင်း ( Painful menstrual cramps)
အမျိုးသမီးအများစုဟာ ရာသီသွေးဆင်းနေစဉ်မှာ သားအိမ်နာခြင်း သားအိမ်ကိုက်ခြင်းကို ကြုံတွေ့ ရလေ့ရှိပါတယ် ။ သားအိမ်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေရယ် သားအိမ်ကို ၀ိုင်းရံထားတဲ့ ၀မ်းဗိုက်အတွင်းက ကြွက်သားတွေဟာ ရာသီသွေးကို သားအိမ်ကနေ အပြင်ထွက်အောင် တွန်းထုတ်ဖို့အတွက် ဆွဲဆုပ်ထားသလို ညှစ်ရ တဲ့အတွက် ဒီလို နာကျင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလို သားအိမ်ကြွက်သားတွေကျုံ့ဖို့အတွက်ကိုတော့ သားအိမ် ကို ကာရံထားတဲ့ တစ်ရှူးတွေကနေလုပ်ဆောင်ပြီး ဒီလိုအချိန်မှာ ပိုလျှံနေတဲ့ fatty acids တွေဖြစ်တဲ့ Prostaglandins တွေက ကြွက်သားတွေကို သွားရောက်လှုံ့ဆော်ပြီး Contraction ကိုဖြစ်စေပါတယ် ။ ဒါကိုတော့ မူလသွေး ဆင်းစဉ်နာကျင်ခြင်း Primary dysmenorrhea လို့ခေါ်ပါတယ် ။ Primary dysmenorrhea ဟာ Menarche လာပြီး တစ်နှစ်သို့မဟုတ် နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ စတင်လေ့ရှိပါတယ် ။ သွေးဆုံး တဲ့အ ချိန်ထိ ကြုံရလေ့ရှိပြီး အမျိုးသမီးအများစုကတော့ ဒီလို dysmenorrhea ရဲ့လက္ခဏာတွေဟာ သူတို့အသက် ၂၀ လောက်အရွယ်မှာ လျော့နည်းသွား ၊ သက်သာသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ် ။ အကယ်၍ ဒီလို နာကျင်ခြင်းဟာ သွေးဆင်းစဉ်ကာလ Menstrual periods ကြားကာလများအတွင်းမှာ ကြုံရမယ်ဆိုခြင်း သို့မဟုတ် သွေးဆင်းပြီး ရက်အနည်းငယ်လောက်ထိ ဆက်ပြီး နာကျင်နေမယဆ်ိုရင်တော့ ဒါကို Secondary dysmenorrhea လို့ခေါ်ပါတယ် ။
Dysmenorrhea ရဲ့လက္ခဏာတွေဟာ တချို့သောအမျိုးသမီးတွေမှာ အလွန်အမင်းဆိုးရွား အားအင်ကုန်ခမ်း သွားစေတာ ကိုတွေ့ရပါတယ် ။ ဒါဟာ တချို့တွေမှာ ဖြစ်ပြီးတ ချို့တွေမှာ တော့ဘာ လို့မဖြစ်ရသလဲ ဆိုတာ ကိုတော့ တိတိကျကျ မသိရပါဘူး ။ ပြင်းထန်တဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ ဒီလိုသားအိမ်ကိုက်ခဲမှုဟာ တင်ပဆုံရိုး ၊ ကျောရိုးအောက်ဖက် နဲ့ပေါင်တွေအထိပါ ပျံ့နှံ့သွားလေ့ရှိပြီး ပျို့ခြင်း မကြာခဏ ၀မ်းသွားခြင်း နဲ့ ၀မ်းချုပ်ခြင်းစ တာတွေကို ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ် ။ ကုသမှုတွေကတော့ Prostaglandin ကိုပစ် မှတ်ထား ဦးတည်ပြီး anit- prostaglandin သို့မဟုတ် သန္ဓေတားဆေး OC pills တွေနဲ့ ကုသနိုင်ပါတယ် ။ အကိုက်အ ခဲပျောက်ဆေးတချို့ဖြစ်တဲ့ Ibuprofne , naproxen , mefenamic acid စသည်တို့ဟာ ဒီလို လက္ခဏာတွေ ကို ပျောက် ကင်းစေနိုင်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ဆရာဝန်ညွှန် ကြားမှုနဲ့သောက် သုံးဖို့လိုသလို အစာအိမ်အနာ ရောဂါရှိရင်တော့ မသောက်သုံးသင့်ပါဘူး ။
အချို့သောအမျိုးသမီးတွေဟာ သွေးဆင်းနေစဉ်ကာလအတွင်းမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေ ကြုံတွေ့ ရလေ့ရှိပါတယ် ။ လက္ခဏာတွေကတော့ ဂဏာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း ၊ မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း စတာတွေဖြစ်ပြီး စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ခံစားမှု အနိမ့်အမြင့် အတက်အကျကိုဖြစ်စေတတ်ပါတယ် ။ ဒီလို သွေးဆင်းစဉ်ကြုံရတဲ့ လက္ခဏာတွေ Premenstual Symptoms ( PMS) ဟာ ၃% ကနေ ၃၀% အထိ ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ် ။ စိုးရိမ်ပူပန်သော ကများခြင်း နဲ့ စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းခြင်းတွေဟာလည်း PMS ရဲ့ လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် ။ တချို့ ( ရှားတော့ရှား ပါတယ်) သောအမျိုးသမီးတွေကတော့ စိတ်ရောဂါ ဆိုင်ရာအခြေအနေ ( Psychotic episodes) တွေကြုံလေ့ ရှိပြီး သွေးဆင်းခြင်းဟာ အဲဒီအချိန်မှာ သူတို့စိတ်ရောဂါ ( menstrual pyschosis) ကို ပိုပြီးဆိုးရွား သွားစေပါတယ် ။ Premenstrual syndrome မှာ သားအိမ်ကိုက်ခြင်းသာမကပဲ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်း နဲ့ အလွန်အမင်း စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းခြင်းတွေပါပါဝင်ပါတယ် ။ ဒီလို သားအိမ်ကိုက်ခြင်းဟာ ငယ်ရွယ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ( လေ့လာမှုတစ်ခုမှာဆိုရင် အမျိုးသမီး ၆၇.၂% မှာတွေ့ရလေ့ရှိပြီး အသက် ၁၃နှစ်ကနေ ၁၉ နှစ်အ တွင်းမှာ ကြုံရလေ့ရှိ ) မှာပိုပြီး အဖြစ်များတာကိုတွေ့ရပါတယ် ။ ဒီလို လက္ခဏာတွေ ပိုပိုပြီးဆိုးရွားလာခြင်းကိုတော့ Premenstural Dysphoric Disorder ( PMDD) လို့ခေါ်ပါတယ် ။
သွေးဆင်းခြင်းမှုမမှန်မှုများဟာ တကယ်တော့ကျယ်ပြန့်လွန်းလှပါတယ် ။ တချို့တွေမှာ ဆိုးရွားစွာေ ပြာင်းလဲ မှုတွေ ကြုံရပေမယ့်တချို့တွေကတော့ မသိလိုက်မသိဖာသာပဲ ကျော်ဖြတ်သွားတာတွေလည်းရှိပါတယ် ။ အကယ်၍ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အရာတွေထဲက တစ်ခုခုကို ဆိုးရွားပြင်းထန်စွာ ကြုံနေရပြီဆိုရင်တော့ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲဆိုတာကို ရှာဖွေဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြသရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
- သွေးဆင်းကြာချိန် (Periods) မမှန်ခြင်း = Oligomenorrhea
- သွေးနည်းငယ်သာဆင်းခြင်း သွေးဆင်းကြာချိန် တိုခြင်း = Hypomenorrhea
- သွေးခဏခဏဆင်းခြင်း သွေးဆင်းကြာချိန် မြန်ခြင်း ( ၂၁ ရက်တစ်ကြိမ်လောက်သွေးဆင်းခြင်း ) = Hypermenorrhea
- သွေးဆင်းချိန် အလွန်အမင်းကိုက်ခဲနာကျင်ခြင်း = Dysmeorrhea
- အနည်းငယ် အစက်အပျောက်လောက်သောဆင်းခြင်း အထူးသဖြင့် Period နှစ်ခုကြားတွင်တွေ့ရခြင်း ( အမျိုးသမီးအများစုမှာ ဒါဟာပုံမှန်ဖြစ်နိုင်) = Metrorrhagia
- လုံးဝ ရာသီသွေးမပေါ်ခြင်း = Ameorrhea
ဒီယူးဘီဆိုတာဟာ Dysfunctional Uterine Bleeding ကို ခေါ်ဆို ခြင်းဖြစ်ပြီး ဟော် မုန်းတွေကြောင့် သွေး ဆင်းခြင်းမူမမှန်ခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် DUB ကို သွေးဆုံးခါနီး အမျိုးသ မီးတွေမှာ မျိုးဥပုံမှန် မကြွေတဲ့အခါမျိုး(anovulatory) မှာ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ် ။ ဒီလို သွေးဆင်းမူမမှန်ခြင်းအားလုံးဟာ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသဖို့လို အပ်ပြီး ဟော်မုန်း မညီမျှခြင်း ၊ သားအိမ်အတွင်း အလုံးအခဲများဖြစ်ခြင်း နဲ့ တခြားအကြောင်း အချက်များ စွာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ အကယ်၍ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်သွေးဆင်းတယ်ဆိုရင်လည်း ဆရာဝန်နဲ့ပြ သဖို့လိုအပ်ပါတယ် ။ မျိုးပွားနိုင်တဲ့အရွယ် မှာ သွေးဆင်းခြင်းဟာ ပုံမှန် လာရမယ့်အချိန်မှာ မလာသေးဘူး ဆိုရင်တော့ အမျိုးသားနဲ့လည်းအတူနေမိတယ်ဆိုရင်တော့ (အကာအကွယ်သုံးသည်ဖြစ်စေ မသုံးသည်ဖြစ်စေ) ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိ စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေနဲ့တကွ မည်သည့် အကာအကွယ်သုံးခြင်းမှာမဆို ကိုယ်ဝန်ရှိသွားနိုင်ခြင်း Failure rate ဆိုတာ ရှိနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် ။
Ref : http://en.wikipedia.org/wiki/Menstruation
Posted by သက်တန့်ချို at 11:55 AM
အလင်းသစ် December 3, 2011 at 3:43 AM
စပ်စုသွားတယ်အကိုရေ... တစ်ခုခုဆိုရင်တော့ ကိုသက်တန့်ကြောင့်ပဲ... :D :D
သက်တန့်ချို December 3, 2011 at 11:24 AM
တိန် ဖျားဖျား ခြိမ်းခြောက်သွားပါရော့လား :P
အာဂျီးမား December 5, 2011 at 5:38 PM
အမျိုးသမီးတွေအတွက်အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ရာသီသွေးပေါ်ခြင်းကိုတင်ပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေပါ ဗဟုသုတအနေနဲ့ သိထားသင့်ပါတယ်။
ရေ၀တီ March 19, 2012 at 9:26 AM
ပြုမိပါက ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလား ...
များသည်ကို ပိုစ့် တစ်ခုတင်ပြရေးသားစေချင်ပါသည်
ရေ၀တီ March 19, 2012 at 9:30 AM
ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ဖို့ ရာနှုန်းများသောအချိန် နှင့် ရာသီသွေးပေါ်သောအချိန် အကြောင်း Post တစ်ခုရေးသားတင်ပြစေချင်ပါသည်
MK March 19, 2012 at 6:50 PM
ရာသီသွေးပေါ်တုန်းတော့ ဘယ်မိန်းကလေးကမှ လိင်မဆက်ဆံချင်ဘူးထင်ပါတယ်။ ဆက်ဆံမိခဲ့သော် . ရာသီပေါ်သော နေ.ရက်မှ စပြီး ရာသီပြီး ၅ ရက်လောက်အထိ က ovum ဥ က ဝမ်းထဲတွင် မရှိသောကြောင့် ကိုယ်ဝန် မရ နိုင်ပါ။
ကိုယ်ဝန် လိုချင်သော သူများအတွက်အတော့ ရာသီစပေါ်သော နေ.မှ ၁၄ ရက် မြောက်နေ.သည် ဥဥသောအချိန် (Ovulation) (ကတော် ကတော် ဟိ) ဖြစ်၍ အဲဒီနေ.ရဲ. ရှေ ၅ရက် နောက် ၅ရက် မှာ အထူးကျိုးစား က ပို ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။
မှားတာ ရှိကလဲ ခွင့်လွှတ်ကြကုန် ..... OG နဲ. ကိုယ်နဲ. မဆိုင်တော့တာ ကြာခဲ့ပေါ.
MK March 19, 2012 at 6:51 PM